မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: 2013
Posted by Ordinary person at 5:28 PM No comments:
သူအိုး၊ သူ့အိမ်၊ သူ့ခြံမြေ၌
မီးတစ်လူလူ အငွေ့ တစ်ထောင်းထောင်း
တရားနာလျှင် အရေခြုံကိုမကြည့် သူ့ဉာဏ်စင်ကိုသာကြည့်။
﻿၄၈လမ်း အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်းကို မီးသတ်ကားဥသြ မဆွဲဘဲတိတ်တဆိတ်လာတာဟာ ရှို့မီးအတွက်ကြိုတင်လုပ်ကြံပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ ကျောင်းထဲမှာဝါရာကြိုး မီးမလောင်ပါဘူး။ ကြမ်းခင်းမှာဆီတွေစိုနေလို့ ကြမ်းခင်းတွေ ပြောင်နေပါတယ်။ အဲဒီဆီကိုဘယ်သူ လာထည့်သွားပါသလဲ။ ကလိမ်ကကျစ်နည်းနဲ့ရှို့တဲ့ ရှို့မီးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ အဲဒါကို မြန်မာ့အသံကဗြောင်လိမ်ပါတယ်။
အဲဒီညက လူတစ်ယောက်စာသင်ကျောင်းကိုလာသွားပြီး ကားတစ်စီးပေါ်တက်သွားတာ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်မြင်လိုက်ပါတယ်။ ကားနံပတ်ကိုလည်း မှတ်မိတယ်။ အခုအာဏာပိုင်တွေက ဒီကလေးလေးကို ပါးစပ်ပိတ်ပြစ်ဖို့ လိုက်ဖမ်းနေတယ်။
သူတို့ နည်းက အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တစ်နည်း ကလိမ်ကကျစ်နည်းနဲ့တစ်ဖုံ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ဗလီတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်။ ပြီးရင်ဗလီအဟောင်းနေရာမှာ အသစ်ပြန်ဆောက်ခွင့်မပြု - ဒီလိုညစ်ပတ်နေကြတာ မသိဘူးမှတ်နေလား။ မျက်ကမ်းမျိုးချစ်တွေတိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကို အကြမ်းဖက်လိုက်သတ်လို့ရရင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် မြဲမြဲမှတ်ထား အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်သွားဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ OIC လာမှာကိုဘာကြောင့် ခါးခါးသီးသီး ပြည်တွင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြသလဲ။ အခုလိုတစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက် အပြစ်မဲ့တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို သတ်ဖြတ်နေတာကို OIC အဖွဲ့မှ မသိ မမြင်စေချင်၊ ကမ္ဘာ့ခုံရုံးမှာ အရေးယူခြင်းမခံရအောင်၊ သူတို့လုပ်ကြံမှုတွေကို တိုင်းပြည်အပြင်သတင်းမပြန့်နှံ့သွားရအောင် ကြံစီထားကြတယ်ဆိုတာ အချိန်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတို့က သက်သေပြနေပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာငါးပါးသီလကို အရှက်အကြောက်မရှိ ပေါ်တင်ကျူးလွန်နေကြပြီလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကိုလည်း နာခံသူတွေဖြစ်ရမယ်။ ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ကိုးကွယ်နေတာလား ကိုယ့်မိစ္ဆာစိတ်ကိုကိုးကွယ်နေတာလား။ .
*ပါဏာတိပါတာ - သူ့အသက် သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ရန်
(အခုတော့ အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကို ရိုက်သတ်၊ ထိုးသတ်၊ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်၊ သားသ္မီးချင်းမစာနာ ကလေးလေးတွေကအစလိုက်သတ်နေတာ လူစိတ်မရှိကြတော့ဘူး)
*အဒိန္နာဒါနာ - သူတစ်ပါး ပစ္စည်း ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
(သူများအိမ်တွေ ဆိုင်တွေ ဖျက်ဆီး၊ သူများပစ္စည်တွေ လုယူ၊ ခိုးယူ၊ ဓါးမြတိုက်ယူ)
*ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ - သူတစ်ပါး သားမယား ပြစ်မှားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
(တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုက အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမကော၊ အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ အပျိုလေးတွေပါ မုဒိန်းကျင့်)
*မုသာဝါဒါ - လိမ်ညာ ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ရန်
(လူမဆန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်ပြီး မီဒီယာပေါ်မှာ မျက်နှာဗြောင်တိုက်ပြီးလိမ်)
*သုရာ မေရိယ - သေရည် အရက်သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
(အရက်သောက်ပြီး လူသတ်၊ အရက်သောက်ပြီးရမ်းကား၊ အရက်လက်ဆောင်ရရင် အင်မတန်သဘောကျ)
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တစာစာအော်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တို့အသံတွေ ဘယ်ရောက်သွားကြပါသလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းပီသရင် အခုလိုရေငုံနှုတ်ပိတ်မနေကြဘူး။ လူမှုရေးဖက်က၊ တရားဥပဒေဖက်က၊ ဘာသာရေးဖက်က ထွက်ပြောရမယ်။ လူသားအချင်းချင်းစာနာမှုပြရမယ်။ ကိုယ်ဟောနေတဲ့တရားတွေ၊ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေက မြန်မာစစ်မှရမယ်ဆိုတာမျိုးလား။
မြန်မာလူမျိုးသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန်မှ စိတ်နေသဘောထားကောင်းလွန်ပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူပြီးပြောကြတယ်။ အရင်ခေတ်တွေကတော့ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်။ အခုတော့ အင်မတန်မှ ရက်စက်တတ်လွန်းတာ ကမ္ဘာကတောင် လက်ဖြားခါသွားပါပြီ။
Posted by Ordinary person at 2:16 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 4:54 PM4comments:
Posted by Ordinary person at 4:49 PM No comments:
Ref : Share from FB
Posted by Ordinary person at 3:57 PM No comments:
မျက်ကမ်းမျိုးချစ်များသည် ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းစဉ်ကိုသွေဖယ်ပြီး မိမိအတ္တကိုသာ ကိုးကွယ်နေကြပြီလား
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ပေါ်ခဲ့ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သီးသန့်ကန့် သက်ချက်
နဲ့ ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်း မဟုတ်။
မြန်မာပြည်အတွက် သီးသန့် ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းလဲမဟုတ်။
မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံများ အတွက်သီး
အတိအကျပြောရသော်...ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသား များ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် ဖြစ်သည်။
သက်ရှိသတ္တ၀ါ အားလုံး၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ဖြစ်သည်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အဆင့်မြင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာအတွက်ဖြစ်သည်။
လူသားအားလုံး၏ အဆင့်မြင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ အတွက်ဖြစ်သည်။
ကုလားဟူ၍ မခွဲခြားခဲ့။ တရုတ်ဟူ၍ မခွဲခြားခဲ့။
အသားဝါ မဲ သည်ဟူ၍ မခွဲခြားခဲ့။
အဟုတ်သော်ကား..... လူသားပဓာန၀ါဒ အတွက် ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။
အဟုတ်သော်ကား.... မြတ်စွာဘုရားသည် လူမျိုးကြီးစနစ်ကို တော်လှန်၍
အောင်မြင်သော လက်ရှိ သာသနာတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဇာတ်စနစ် ခွဲခြားခြင်းကို တော်လှန်ပြီး အောင်မြင်သော ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကျမ်းကိုး (သီလက္ခန္ဓ၀ဂ်၊ အမ္ဗဋ္ဌသုတ္တန်။)
Ref : ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးစုံ သူငယ်ချင်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့
Posted by Ordinary person at 10:19 AM 1 comment:
Real monk have no racist.
Real monk have no terrorist.
Real monk understand the equality.
Real monk never kill to others life.
(Because they are son of Buddah and killing is forbidden in Buddhish).
Real monk guided people not to commit sins.
Real monk haveapeace of mind.
Real monk never keep silent on brutal killing.
Real monk will never do suchashame things.
People of Myanmar need education. They need to understand human rights, unity and patience.
Now country of Myanmar's image have been changed to Buddhish terrorist country in the world. It is shame. Government have to responsible it !
Posted by Ordinary person at 10:01 AM No comments:
Read this Du'a for daily